Забур 138 CARS - Nnwom 138 AKCB
1Awurade, mede me koma nyinaa ayi wo ayɛ;
mɛto wʼayeyi dwom wɔ “anyame” no anim.
2Mede mʼani bɛkyerɛ wʼasɔredan kronkron no, akotow wo
na makamfo wo din
wɔ wʼadɔe a enni huammɔ ne wo nokwaredi nti,
efisɛ woama wʼahyɛde no so yiye;
ama asen wo titiriwyɛ.
3Bere a misu frɛɛ wo no, wugyee me so;
woma minyaa akokoduru ne nnamyɛ.
4Awurade, sɛ ahemfo a wɔwɔ wiase nyinaa te nea woahyɛ no a,
ma wɔnkamfo wo.
5Ma wɔnto Awurade akwan ho nnwom,
na Awurade anuonyam yɛ kɛse.
6Ɛwɔ mu sɛ Awurade wɔ ɔsorosoro de, nanso ɔhwɛ mmɔborɔfo,
na ahantanfo de, ohu wɔn wɔ akyirikyiri.
7Ɛwɔ mu sɛ menam ɔhaw mu de,
nanso wobɔ me nkwa ho ban;
woteɛ wo nsa wɔ mʼatamfo abufuw so,
na wode wo nsa nifa gye me nkwa.
8Awurade bɛma nea wahyehyɛ ama me no aba mu;
Awurade, wʼadɔe wɔ hɔ daa,
nnyaa wo nsa ano nnwuma akyidi.
AKCB : Nnwom 138